Soomaaliya, 01 January 2018
Q.M. oo Walaac ka Muujisey Burburin Lagu Hayo Xarrunta Barakacayaasha ee Muqdisho
Ku xigeenka wakiilka gaarka ah ee xog-hayaha guud ee Q.M. ee dhanka deegaanka iyo xiriirinta arrimaha bani’aadanimada ee Soomaaliya, Peter De Clercq, ayaa walaac ka muujiyey wararka sheegaya bur burin lagu hayo xarrun ay deggan yihiin barakacayaasha iyo adeegyada bani’aadannimo ee KM 13, degmada Kaxda ee gobolka Banaadir.
Ciidamo Weeraray Hoyga C/qeybiid iyo Dowladda oo ka hadashay
Ciidamo hubeysan ayaa duhurkii Sabtida, xilliga Muqdisho, weeraray hoyga Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid) oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Dhageyso Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha ee 2017
Dhagaystayaal ku soo dhawaada Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha oo toddobaadkan aanu ugu talo galnay sanadka cusub ee inagu soo aadan waxaana si wadajir ah inoogu soo tabin doona Ibraahim Xasan Daandurey iyo Caasho Ibraamih Aaden (Cuud).
Madaxweynihi Hore Cabdiqaasim Salaad oo Xaaladda Dalka ka Hadley
Dhacdooyinkii ugu Waaweynaa ee 2017 ee Soomaaliya
Dhageystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadka 2017-ka ka dhacay gudaha Soomaaliya.
Iska-horimaad Gaalkacyo ka Dhacay oo Dhimasho iyo Dhaawac Sababay
Hal qof ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay iska hor imaad maanta magaalada gaalkacyo ku dhex maray maleeshiyaad hubeysan.
Dowladda Soomaaliya oo Sheegtay inay la soo Wareegtey Maamulka Hawada
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaqday inay la soo wareegtay maamulka hawada dalka, oo tan iyo burburkii dowladdii dhexe gacanta Soomaalida ka maqneyd.